QORMOOYINKA – Page 24 – War La Helaa Talo La Helaa
Home » QORMOOYINKA (page 24)
Fanaanka Caanka Ah Ee Wizz Khaliifa Oo Rikoor Cusub Ka Sameeyay Barta You Tube (Warbixin Dhinacyo Badan Taabanaysa)
Jiinoow 16/07/2017	1,006 Views
Wizz Khaliifa oo kamid ah fanaaniinta ugu caansan kuwa reer Mareykan ayaa ku garaacay PSY fanaanka la yiraahdo ee reer Kuuriya, heesta loogu daawashada badan yahay barta You Tube. Heestii Barroor diiqda ahayd ee “See You Again” oo uu ku macsalaameynayay jilaa Paul Walker oo kamid ahaa jilaayaashii taxanaha Fast and Furious” ayaa gaartay daawadayaal kabadan 2,907,575,000, tan iyo maalinkii ...
Waa Kuma Shaqsiga Ugu Cad-Cad Doorashada Soomaaliland? (Warbixin Xasaasi Ah)
Jiinoow 16/07/2017	807 Views
Wax ka yar 100-maalmood ayaa ka harsan in shacabka maamulka Soomaaliland ay u dureerraan goobaha cod bixinta, maadaama xilligaas ay tahay wakhtiga rasmiga ah ee loo asteeyay doorashada madaxtinimo ee maamulkaas. C/raxmaan C/lahi Cirro iyo Muuse Biixi Cabdi oo ka kala socda xisbiga talada haya ee kulmiye iyo Waddan ayaa ah shakhsiyaadka ugu cad cad doorashada Soomaaliland ee dhici doonta ...
Is Bar-Bar Dhig: Xasan Sheekh Maxamuud Walaalkiisa Iyo Farmaajo Walaalkiisa! (Sheeko Xiiso Badan)
Jiinoow 16/07/2017	1,906 Views
“Haddii uu walaalkaa yahay madax wayne, waxa loo dhaqmaa sida madax wayne” waa xikmad aan ka baranay madaxda madaw Afrikaan ka ah ee qaaradda ku nool. Cali Sheekh Maxamed Iyo Axmed Cabdullahi Farmaajo, waa labada walaal ee ka yar Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxwayne kasoo noqday Soomaaliya. Sidaan lawada socono, Cali Sheekh Maxamuud markiisii hore wuxuu ...
DAAWO: Alshabaab Oo Fillim Waalli Ah Soo Bandhigtay Iyo Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Fillimkaas
Jiinoow 16/07/2017	1,423 Views
Dhaq dhaqaaqa Al shabaab ayaa soo bandhigay Fillim kale oo ay ugu madax dareen “قناديل من نور” oo ay ugu talla galeen in ay kudhiiro geliyaan dhallinyarada yar yar in ay is qarxiyaan adduunkana macsalaameeyaan, iyadoo loo xirayo shaati diimeed. Muuqaalkan oo ay Alqaacidda leedahay xuquuqdiisa, waxaa kasoo muuqanaya nin lagu magacaabo Abuu-Yaxyaa Al Libi, kaas oo sida muuqata kasoo ...
Alshabaab Oo Gaalnimo Ku Xukumay Wadaadka Soomaaliyeed Ee Sheekh Nuur Baaruud Burxan
Jiinoow 16/07/2017	1,089 Views
Dhaq dhaqaaqa Alshabaab ayaa ku xukumay Riddo iyo gaalnimo diin ka bax ah, wadaadka Soomaaliyeed ee Sheekh Nuur Baaruud Burxan, kaas oo kamid ah wadaaddada taageersan dawladda federaalka Soomaaliya. Sheekh Jaamac Adam iyo Sheekh Mukhtaar Abuu Muslim, oo kamid ah Alshabaab ayaa ku tilmaamay in uu Sheekha ka baxay diinta Islaamka, kaddib markii loo magacaabay kuxigeenka guddiga taakuleynta qaranka. Alshabaab ...
Muxuu Maalin Walba C/casiis Xildhibaan Ka Sameeya Xarunta Gobolka Banaadir?! (Sir Iyo Kashifaad, Waxa Aadan Fillayn)
Jiinoow 16/07/2017	1,912 Views
Cabdicasiis Xildhibaan oo kamid ah dadka ugu caansan beelaha muddolood ee dhanka siyaasadda ku jira, ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga bixin waayay xarunta gobolka Banaadir ee degmada Xamar Wayne. Xildhibaan oo kamid ah saaxibbada dhaw ee Thaabith Cabdi Maxamed ayaa warar hoose oo ay helayso SHaaciye waxa uu sheegayaa in uu diyaar u yahay in uu xil ka qabto gobolka ...
Muqdisho Iyo Maxaa Iska Galay Ankara! Safaaradda Turkiga Ee Muqdisho Oo Hawl Aan Soomaaliya Quseyn Ka Fullineysa Caasimadda
Jiinoow 15/07/2017	1,887 Views
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Ambasador Olgen Beiger ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in munaasab lagu maamuusayo sannad guurradii kasoo wareegatay markii la fashiliyay afgembi aan dhiig ku daadan oo lala damacsanaan xukuumadda Ankara. Maanta caalamka oo idil ayaa laga xusayaa markii ay shacabka Turkiga diideen in dalkooda oo ka dhaco Af Gembi iyo qalalaaso hor leh, aynna ka biya diideen Fathullah ...
Maxaan Ugu Baahanahay In Yuusuf Garaad Laga Qaado Xilka Wasiirnimo?
Jiinoow 15/07/2017	1,778 Views
Warar hoose oo ka imaanaya madaxtooyada, gaar ahaan xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa sheegaya in Yuusuf Garaad Cumar iyo wasiirro kale ay ugu horeeyaan dadka ay qaadi doonto dabeesha isku shaandheynta ee Ra’iisul wasaarre Kheyre la filayo in uu dhawaan sameeyo. Waxa ugu wayn ee aan ka filayno Yuusuf Garaad waa qoridda maqaallo iyo warbixino sir ah oo uu kashifayo, maadaama ...
Waa Kuma Wasiirka Ugu Horreya Ee Ay Saameyn Doonto Isku Shaandheynta Kheyre (Sir+ Shaqsiga Lagu Baddali Doono)
Jiinoow 15/07/2017	2,009 Views
Haddii dhawaan ay xukuumadda ra’iisul wasaare Kheyrre ka badbaaddo mooshinka lala maleegayo, waxaa la filayaa in isku shaandheyn lagu sameyn doono golaha wasiirrada xukuumadda Soomaaliya. Warar hoose oo ay shabakadda Shaaciye helayso ayaa sheegaya in qaar kamid ah wasiirrada golaha Kheyrre ay wayn karaan booskooda, halka siyaasiyiin kalana fursad ay u heli doonaan kasoo muuqashada masraxa siyaasadda Soomaaliya. Wasiirka Arrimaha ...
jabra 14/07/2017	669 Views
Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay shirkii ugu ballaarnaa ee looga hadlay caqabado ku hor gudban tan iyo markii la saasay muddo ku dhow 20-sano, waxaana shirkaasi ka soo qeyb galay dhammaanba naadiyada Shataranjiga ee uu xiriirku aqoonsan yahay. Arrimaha ugu waaweyn ee shirweynaha looga hadlay oo toban qodob ka koobnaa ayaa waxaa ka mid ahaa: horumarka Shataraniga ...
Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Oo Xukun Ku Ridday Dabley Dishay Mid Kamid Ah Nabaddoonada Soomaaliyeed